Home Wararka Jubaland oo sheegtay inay qabtey Shabakado ka tirsan Al-shabaab
Jubaland oo sheegtay inay qabtey Shabakado ka tirsan Al-shabaab
Maamulka Jubaland ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen shabakado labo ah oo ka tirsanaa AL-shabaab una qaabilsanaa qaraxyada iyo dilalka qorsheysan.
Wasiiru dowlaha Wasaaradda amniga Maamulka Jubaland Maxamed Cabdi Kaliil,ayaa sheegay in Shabakaddan oo ka kooban 10 Qof ay todobo ka mid ah qirteen.
Waxaa uu intaas ku daray Kaliil, Ciidamada amaanka ay ka hortageen Raggaas oo lagu qabtay Magaalada Baardheere.
Mr Kaliil ayaa sheegay in xubno kale ay ka baxsadeen kuna dabajiraan,waxaa sidoo kale uu sheegay in todobada xubnood ee dambiga qirtay ay hayaan.
Maxamed Cabdi Kaliil ayaa Odayaasha Gobolka Gedo uga digay in ay u dacwad tagaan AL-shabab,waxaana uu sheegay in maamulka uu la xisaabtamayo Odayaasha la shaqeeya AL-shabab.
Jubaland ayuu sheegay in ay ogtahay odayaasha taga Magaalada Jilib,lana shaqeeya AL-shabaab.
Previous articleMichael Keating oo ka dayriyay hanaanka Caddaalada dowlada Soomaaliya
Next articleAqalka Sare Oo Soo Saaray Liiska Wafuuda Loo Kala Dirayo Maamul Goboleedyada+Aqriso
Dowlada Qatar oo Malaayiin Doolar Ku Bixineeysa Sidii Wasiirka Qorsheeysan Jamaal...